Muqdisho: Saddex cisho oo Baroor-diiq ah | Berberanews.com
Home WARARKA Muqdisho: Saddex cisho oo Baroor-diiq ah
Muqdisho: Saddex cisho oo Baroor-diiq ah
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay saddex maalmood oo baroordiiq qaran ah oo loo sameynayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii magaladaasi gilgilay, waxa uuna sidoo kale amray in muddadaas calanka hoos loo dhigo.
Fariin muuqaal ah oo xalay laga baahiyay taleefishinka qaranka Soomaaliya ayuu Madaxweyne Farmaajo kaga dhawaaqay maalmaha baroordiiqda ah: “Walaalayaal waxaan qaraxii maanta dhacay ku waynay dad badan oo bulshada dhexdeeda qiimo ku lahaa, sidaa darteed waxaan ku dhawaaqayaa saddex maalmood oo baroordiiq ah iyo calanka jamhuuriyadda in hoos loo dhigo.”
“Waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u midoobaan cadawga banneystay dhiigooda iyo maalkooda una taagan inuu carqaladeeyo nabadgelyada.” Ayuu raaciyay Farmaajo.
Madaxweynaha ayaa ku baaqay in Soomaalida ay meel iska dhigto kala qeybsanaanta uu sheegay in aanay u adeegayn danaha qaranka si looga adkaado buu yiri cadawga dhibaatadaas gaystay.
Dhanka kale Farmaajo ayaa sheegay inay ahmiyadda koobaad siin doonaan sidii ay usoo celin lahaayeen ammanka dalka, isagoo amray hay’adaha amniga ee Soomaaliya inay adkeeyaan ammaanka si ay uga hortagaan buu yiri dhagarta Al-Shabaab.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa sheegay in qaraxii shalay Muqdisho ka dhacay uu ahaa musiibo ku habsatay shacabka, dadkana waxa uu ka dalbaday in loo gurmado dadkii ay dhibaatadu soo gaartay.
“Waxaan shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaa inay garab istaagaan oo ay gargaaraan oo ay gacan siiyaan dadka walaalahood ah ee ku waxyeeloobay qaraxii waxashnimada ahaa ee dhacay magaalada, dadkaas oo qaarkood ay isbitaallada yaallaan. Waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inan gurmad degdeg ah u sameyno dadkaas, qofkii ku tabaruci karo dhaqaale iyo qofkii ku tabaruci karo dhiig.” Ayuu yiri Farmaajo.
Qeyba badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaanan ilaa iyo xalay laga seexan oo waxaa soconayay gurmadka loo samaynayay dadkii ku dhaawacmay weerrarkii xoogga badnaa ee magaaladaasi shalay gilgilay.
Isbitaallada magaaladuna waxa ay weli la tacaalayaan dhiibaatada ballaaran ee ka dhalatay qaraxaasi, iyadoo aaggii uu ka dhacay qaraxa oo aheyd goob mashquul badan burburka hoostiisa tan iyo xalay laga soo saarayay maydad hor leh iyo kuwo dhaawac ahba.
Previous articleDadka ku dhintay Qaraxii Muqdisho oo laba boqol kor u dhaafay
Next articleJaamacadda Hargeysa oo kuliyado cusub soo kordhisay